Ohabolana Malagasy - BOKY VOLAMENA
Azonao soratana eto ny ventsoventsom-ponao sy ny hetahetanao mikasika ny tranonkala sy ny Teny malagasy.
Date: 15/05/2013, 12 12 21 (UTC)
Message: Mafinaritra daholo @ankapobeny fa maniry kosa ho an'ny ohabolana mba atao miloko ny "palette" tsindrina mba tsy hahavery satria ny ankizy koa mba liana mijery
Isaorana anareo mpikarakara ary maniry anareo hahatontosa tsara lavitra hatrany.
E-mail: hrinah2 gmail.com
Date: 11/04/2013, 05 05 04 (UTC)
Message: tena tsara ny mianatra kabary
E-mail: herymams yahoo.fr
Date: 08/03/2013, 09 09 11 (UTC)
Message: Tsara tokoa ary tena mahasoa!mirary ny hitohizany hatrany!!
E-mail: mrandrianavao yahoo.com
Date: 21/02/2013, 14 02 23 (UTC)
Nom: Rnaivosoa A. Désiré
E-mail: ndriamiadana gmail.com
Date: 10/02/2013, 19 07 24 (UTC)
Message: Tena mankasitraka sy mankahery ny ezaka vita.
Inrokely : ny fahitsian'ny fomba fanoratra no tokony jiezahana kokoa, satria maro ny olona mijery ity ohabolana malagasy ity.
Azo atao ny miara-miasa mikasika izay.
E-mail: rricogatien yahoo.com
Date: 07/02/2013, 06 06 34 (UTC)
Message: Tsara ary tohizo
Nom: TOVONDRAINY Yvon Owladys
E-mail: ytovondrainy ymail.com
Site web: http://ytovondrainy.e-monsite.com
Date: 31/01/2013, 13 01 23 (UTC)
Message: Mahafinaritsa be fa hay tena mbola maro ny Malagasy ankafy sy tia ary manindrahindra ny maha malagasy tahaka anareo. Tohizo hatrany namana fa tsara ka! toraka voninkazo ho anareo ireny; Mahereza amin`izay atao namana.Andriamanitra hanampy
E-mail: lorisvictoria yahoo.fr
Date: 29/01/2013, 17 05 08 (UTC)
Message: mangataka ohabolana momban'ny fanahy sy ny fandrosoana nefa tsy mahafapo ny valiny fa toa hafa no miseho!misaotra!
Nom: RAKOTONZRIVO ANDRIAMISA TOJONIRINA
E-mail: tojonirina27 gmail.com
Date: 22/01/2013, 06 06 11 (UTC)
Message: tsara ny teny malagasy re olona o
Date: 18/12/2012, 06 06 03 (UTC)
Déjà 297356 visiteurs (837074 hits) aujourd'hui